करोडौ खर्चे पनि पानीको समस्या ज्यूँ का त्युँ, दुषित पानी पिउन बाध्य ! - करोडौ खर्चे पनि पानीको समस्या ज्यूँ का त्युँ, दुषित पानी पिउन बाध्य !
करोडौ खर्चे पनि पानीको समस्या ज्यूँ का त्युँ, दुषित पानी पिउन बाध्य !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ८ श्रावण, 02:38:03 AM
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बर्सेनी करोडौँ खर्चे पनि पानीको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सव–डिभिजन कार्यालयका अनुसार जिल्लाका ३१ हजारमध्ये २४ हजार घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा छ ।
२०७५, ८ श्रावण, 02:38:03 AM